Taorian’ny fandalovan’ny Papa: nivaivay indray ny fitohanan’ny fiara | NewsMada
Taorian’ny fandalovan’ny Papa: nivaivay indray ny fitohanan’ny fiara
Omaly talata, niverina nitohana indray ny fifamoivoizana eto Antananarivo Renivohitra. Mitohy indray, araka izany, ny asa fanamboaran-dalana izay nihato nandritra ny fandalovan’ny Papa Fransoa, ny faran’ny herinandro teo.
Mikatso tanteraka ny fifamoivoizana toy ny eny Anosibe, ny eny Andraharo, ny eny Ankorondrano, ny eny Analamahitsy… Efa misy ihany ny lalana vita, saingy mbola manelingelina ny fanamboarana ny sisin-dalana izay tsy misy farany.
Ny sekoly manaraka ny rafi-pampianarana frantsay rahateo, efa niverina nisokatra avokoa. Mbola haharitra hatramin’ny faran’ny volana oktobra ny fanamboaran-dalana sy ny sisin’ny arabe ka vahaolana ny miainga mialoha raha hamonjy fotoana na mandeha an-tongotra raha akaiky ny toerana aleha.